Wadahadalka Onlf iyo Ethiopia Dexmarahaya | ogaden24
Wadahadalka Onlf iyo Ethiopia Dexmarahaya
Jan 18, 2018 - Aragtiyood
Si guud arrin wanaagsan baan u arkaa inay dadku aragtidooda ka dhiibtaan wada-xaajoodka dhawaanta la filayo inay dhexmaraan ONLF iyo Ethiopia, sababtuna waxaa weeye masiirka laga wada hadlayo Ururkuna gooni uma leh Ethiopia-na ma lehee waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed ee waddanka iska leh. Sidaa awgeed inay dadku arrintaas faalleeyaan, sii odorosaan, talooyin ka dhiibtaan, digniino ka bixiyaan waa arrin aan keliya muhiim ahayne daruuri ah. sidaa hadday tahay waxaa ONLF looga baahan-yahay inay dhuuxdo fikradaha dadka intooda hadlikarta, dadkana waxaa laga rabaa inay tallooyin shiilan gudbiyaan oo layska daayo wixii aan qiimo lahayn ee dayaacad, buun-buunin ama niyad jabin bulsho ah. Qofkii ONLF u neceb ONLF ahaan, wanaag iyo xumaan-na diidan ruuxaasi tiisa hayska wato (illeen kollay na maqli maaye).
Sidaad ogtihiin ONLF khibrad wanaagsan ayey u leedahay hab-dhaqanka Ethiopia ee wada-xaajoodka, waxay xusuusan yihiin:
– Ka bixitaankii Meles Zenawi ee shirkii Qabridahar sanadkii 1995;
-Wadahalkii lagu shirqoolay ergadii wada-xaajoodka ee Ururka sanadkii 1998 kadib markuu dagaalkii Eritrea bilowday;
-isku daygii wadahadal ee sanadkii 2005 kadib markii mucaaradka Ethiopia doorashooyinkii guulo waaweyn kasoo hooyeen;
– tii ugu dambaysay ee sanadkii 2012 soo bilaabatay, iyo tiro badan oo xidhiidho toos iyo si dadbanba ah oo ururka iyo Ethiopia u dhexmaray dhammaantood waxay tahay inuu Ururku ka dhaxlo waayo’aranimo mug-wayn oo looga gaashaanto dhagar kasta oo ku lifaaqan wada-xaajoodka.
Wada-xaajoodyada aynu kor ku xusnay qaarkood ONLF waxay gashay iyadoo aad u tabar-yar, khasaare badan oo maanta dhacayna laga bad-qabay, qaarna waxay gashay iyadoo siday maanta tahay ka abaabul wanaagsan, laakiin labada goorba wuxuu ururku ka midaysnaa qab-weyni iyo ku sugnaanta hadafkii loo aas-aasay.
In Kabadan rubuc-qarni halgan hubaysan iyo loollan siyaasadeed ah maanta ONLF iyo Ethiopia labadaba waxaa saaran culaysyo laga yaabo inay wada-xaajoodka ku riixaan si ka dhaw siyaabihii hore; Ethiopia wuxuu culays ka haystaa dejinta iyo isku-haynta dalkii Ethiopia iyo dadkii oo qoomiyado u qaybsan halka ONLF ay u baahan-tahay fursad ay dib isugu habayso kuna saxdo wixii khaladaad jira ee dhexdeeda iyo dabcan wixii loo socday oo marwalba culayskeedu taagan yahay.
Haddaba Ethiopia talo noogama baahnee, ONLF waxaa la gudboon taxadar faraban iyo in wada-xaajoodkan loo galo si ka fiirsi iyo feejignaan badan kuwii hore oo dhan, maxaa yeelay waxaa maanta jira duruufo lagu khaldami-karo oo muuqaalkoodu-yahay sidii dhaan daban-gaalaha oo kale laakiin laga yaabo inay xaqiiq khadhaadhi ku hoos jirto.
W/Q: Ismaaciil Cali Ismaaciil